Ingcezu yeendaba malunga nexesha leKrisimesi
Ngomhla wamashumi amabini anesine kuDisemba, inkampani yalungisa ii-apile ezipakishwe kakuhle zaza zazihambisa kubo bonke abasebenzi, ngethemba lokuba wonke umntu angaphila, ekhuselekile kwaye onwabile kuNyaka oMtsha. 2021 kwaye sonke singonwabela ...
Entsha malunga nenkampani yokucima umlilo
Nge-20 kaNovemba nge-6 ngokuhlwa, Sasiqhuba uqeqesho kulwazi lomlilo, imisebenzi yokuloba umlilo, inqanaba lokuqala lathunyelwa kumasifundisane ngolwazi lokukhusela amehlo kunye nesilumkiso esithi, "imveliso ekhuselekileyo" ivule ngokusemthethweni ...
Uphicotho lwe-GMP olwenzelwe i-CVS PHARMACY, INC.
Uphicotho-zincwadi oluLungileyo lweMveliso (GMP) lubandakanya ukuvavanywa kweenkqubo kunye neenkqubo ezisetyenziswa yinkampani ukugcina nokulawula umgangatho wezinto ezilawulwa yi-FDA. Ngokusekwe kwiimfuno zabathengi bethu beCVS PHARMACY, INC., Sizahlulahlula siphumeze ngokupheleleyo ulawulo lomgangatho weGMP ...
Umtya omtsha wokulungisa umbhobho wasekwa!
Kutshanje simisele umgca omtsha wokwenza umbhobho wentsimbi. Ngokukodwa kubandakanya ukusika umbhobho wesinyithi, ukugoba, ukwanda, ukuncipha kunye nokuwelda. Umgca wemveliso entsha usinceda ukuba sikhulise i-tubing yesinyithi kubathengi bethu kubungakanani obahlukeneyo ukuze bahlangabezane neeodolo zabo ezisezantsi kunye nenkqubo eyimfuneko ...
Ngokufudumeleyo bhiyozela iwebhusayithi yenkampani entsha!
Wamkelekile kwiwebhusayithi yethu entsha, enika ukubonisana ngakumbi kunye neendlela ezilula zokunxibelelana, kwaye sijonge phambili ekusebenzeni nawe ngakumbi.
Izixhobo zokuCoca imoto, Ipleyiti yePlastiki enokuphinda isebenze, Sela imoto yokubamba, Izibuko zelanga zangokwezifiso, INdebe yeNdebe yeMoto eyandisayo, Amacwecwe ePlastiki alukhuni,